Haasawaa Prezdent Keeniyaattaan miseensolii paarlaamaa biyyaaf taasisan sa’a tokkoo ol ka fudhate ture.
Dubbii isaanii kana keessattis waan bulchiinsi isaanii ganna darbe kana biyyaaf hojjete gurguddoo dubbatan.
Weerarri Vaayresii Kooronaa kaayyoo bulchiinsa isaanii akka danqe, dhibeen kunis lammilee biyyattii 1800 ol ajjeesee miiliyoonaan ka lakkaawaman rakkoo hawaas diinagdeef saaxile jedhan. Kanaafis bulchiinsi isaanii ji’oottan 7 darban kana sabi akka hin miidhamneef bifa deeggarsaa fi gibira hambisuun shilingii biiliyoona 1 fi biiliyoona 76 baasii godheera jedhan.
Gama barnootaatiinis barri barnootaa darbe kun guutummaa guutuutti gufateera erga jedhanii booda bministeerri barnootaa barri dhufus akka hin taane torbee lama keessatti karoora akka qopheessu ajajan.
Inni sadaffaan rakkoo siyaasaa Keeniyaa mudatee ture akka itti furan dubbatan Keeniyaattan. Keessumaa bulchiinsi isaanii wal dhiibdee siyaasaa dursaa paartii mormituu Raylaa duuka ture mariitiin hiikuun biyyaaf bu’aa buuseera jedhan. Keeniyaattaan warri ollaa Keenya jirullee kanarraa baree dansa jedhu.
Yoo odubbatanis, siyaasni shiraa sabatti gadadoo akka fidu. Warri ollaa keenyaallee akkuma nuti walitti dhufnee harka walfuunee mariyanne, waliin dubbachuu danda’uu qabu jedhan.
“Hiriyootni keenya kun dorgommii siyaasaa gama diinummaatti geessuu dhiisanii, dargaggoota isaaniif bakka kennuun wal gooluurraa oolchuu qabu. Nuti Keeniyaanonni filannoon qofti akka biyya adda hiramtetti nagaa hin fidne barreerra, tokkummaan biyyaa akka dhufuuf gaggeessitoonni biyyaa waliin mariyachuu qabu, yoo siyaasa mala bilchaateen gaggeessines nageenyi waarawaan biyya keenya keessatti bu’aa” jechuun dubbatan
Keeniyattaan dhumarratti bulchiinsi isaanii waggootii lameen hafan kaan keessatti bu’uuraalee misoomaa jiran akka fooyyessu, tajaajila poolisii biyyattiis qindeessuuf akka yaada qabu akeekan.